Kiis Dhimasho Qaldan Oo Hadda Loo Gudbiyey Masiibadii Bandhig Faneedka Astroworld
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Kiis Dhimasho Qaldan Oo Hadda Loo Gudbiyey Masiibadii Bandhig Faneedka Astroworld
Qareennada Texas Steve Hastings iyo Henry Blackmon oo ka tirsan Hastings Law Firm ayaa Isniintii gudbiyay dacwad ka dhan ah rapper Travis Scott, Cactus Jack Records, Scoremore, iyo hawl-wadeennada la sheegay ee NRG Park ee la xidhiidha masiibadii ka dhacday xafladda muusiga ee Astroworld oo ay ku dhinteen siddeed qof tiro kale oo badan oo dhaawac halis ah soo gaaray.
Kiiska waxaa loo gudbiyay magaca Maria Pena oo ku taal Harris County, Texas. Ka dib dhacdadii habeenkii Jimcaha, waxay wayday wiilkeeda 23 jir ah, Rudy Pena.
Dacwadda ayaa ku andacoonaysa in horaantii intii ay socotay xaflada ay kooxihii riwaayadaha ahaa ay jebiyeen caqabadihii ka horyimid in ay goobta soo galaan kadibna dadwaynuhu ay ku yaaceen masraxa halka Travis Scott uu soo bandhigay. Eedeymaha ayaa intaa sii dheer waxay muujinayaan ciriiriga ka soo qeyb galayaasha ka soo qeyb galayaasha inay hawada ku neefsanayaan iyadoo qaarkood ay miyir beeleen. Inkasta oo ay dhacdooyinkani dhaceen oo ay baabuurta gurmadka ahi isku dayeen inay gaadhaan dadka dhibaataysan, bandhiggu wuu socday.
Dacwaddu waxay caddaynaysaa arrimo badan oo isugu jira dayacaad iyo dayacaad guud ee Eedaysanayaasha waxayna raadinaysaa in ka badan $1,000,000.00 magdhow ah.